Muran ka taagan Venezuela iyo awoodda garsoorka oo la isku haysto - BBC News Somali
Muran ka taagan Venezuela iyo awoodda garsoorka oo la isku haysto
Xigashada Sawirka, AFP / GETTY IMAGES
Garsoorayaasha oo lagu dhaarinayo xaflad ka dhacday Caracas
Baarlamaanka dalka Venezuela oo ay ku xooggan yihiin mucaaradka ayaa waxa ay magacaabeen 33 garsoore oo ah garsoorayaasha maxkamada sare,taasi oo dhalisay in baarlamaanka lagu eedeeyo in awooda dalka ay maroorsanayaan .
Golaha baarlamaanka dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen in ay xaq u leeyihiin in ay soo magacaabaan shaqada ay ka cayrin karaan garsoorayaasha taasi oo ay sheegeen in tahay mid ku qotonta dastuurka dalkaasi .
Maxkamada sare oo garsoorayaasheeda la sheegay in inta badan ay gacan saar la leeyihiin xubna ka tirsan dowlada ayaa ku tilmaamay tilaabada baarlamaanka mid sharci daro ah .
Dowlada Venezuela ayaan aqbalayn in garsoorayaasha imika shaqeeya laga saaro garsoorka dalka.
Maxkamada sare ee dalkaasi ayaa amartay in dadka rayidka iyo militarigaba in ay qaadaan tillaabo adag oo ka dhan ah magacaabidan.
Mucaaradka ayaa waxa ay dhankooda ku doodeen in waaxda cadaaladda ee hadda jirta ay tahay mid aan sharci ahayn .
Tan iyo intii ay mucaaradka la wareegeen aqlabiyadda baarlamaanka Venezuela sanaddii aanu soo dhaafnay ayaa waxa si joogta ah ay maxkamada sare ee dalkaasi ay u hor joogsanaysay hindisa sharciyeedyada ay meelmariyaan golaha kongreska .
Tan iyo bishii March markii ay maxkamada sare ee dalkaasi Venezuela ku dhawaaqday qorsho ay ku doonaysay in ay kula wareegto awoodaha baarlamaanka, ayaa wax ka dhashay dibad baxyo ilaa hadda maalin waliba ka dhaca dalkaasi.
TPLF oo laga qabsaday magaalo taariikhi ah
Maxaad ka ogtahay magaalooyinka ugu qaalisan iyo kuwa ugu raqiisan ee adduunka?
Messi ma u qalmaa abaalmarinta Ballon d’Or ?
Gabar nin kufsan rabay ka codsatay inuu xiriir jacayl la sameeyo - kaddib maxaa dhacay?
Taariikhdii Addoonsiga iyo deegaannadii Soomaaliyeed ee laga dhoofin jiray dadka